Warmly Welcome: နေ့သစ်ရဲ့ မနက်များစွာ ..
အကိုရေ... အတွေးပွားရုံနဲ့ ပြီးသွားတာ ဟုတ်ဖူးလေ။ ကိုယ်က ရွေးချယ်ခွင့်များနေလို့လား? သူများရဲ့ ရွေးချယ်ခွင့်ကို စောင့်နေတာလား? ကိုဝင်းဇော်တို့ကတော့ ဇွဲကောင်းတယ်တော့... မေဒီတောင် အမြဲတမ်း ဒီလောက် စောစောမထဖူးဘူး။ အဟိ... အိပ်ပုတ်ကြီးတာ ပေါ်ကုန်ပြီ...
အကိုမျှော်လင့်သလို အမြန်ပြည့်ပါစေ .. ပျော်ရွှင်ပါစေ ..း) ဒါနဲ့ အကိုက နှိုးစက်မှမလိုပဲကို .. မရှာရင်လည်းမရှာပါနဲ့တော့ :D .. နောက်တာ ပျော်ရွှင်ပါစေ .. ညီမတော့ မထနိုင်ဘူး .. မဖြစ်မနေ နောက်ဆုံးချိန်ထိ နှိုးစက်ပိတ်အိပ်တာ .. :D
ငါတို့တော့ အမေလာနိုးမှ ထမှာ .. အဟေး
အစ်ကိုရေ စာတွေ ဖတ်သွားပါတယ် ။။။
အမ လဲနှိုးစက် အကူအညီနဲ့ ထနေရတုန်းဝေ့
နက်လိုင်းမကောင်းတာတော့ ငါတို့နယ်မှာဆို သာဆိုးပေါ့ သယ်ရင်းရာ။ ပုံမှန်ကြေးကတော့ သွင်းနေရပေမယ့် ကောင်းလာတာ၊ တိုးတက်လာတာ ဘာမှ မရှိတာ စိတ်ညစ်တယ်။ IT ခေတ်ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ချီတက်မယ်မသိဘူး။ ပြောတော့ မိုးတလုံးလေတလုံး ဖြစ်နေတာက သာဆိုးအဖေကျနေတာပဲ။
ကျနော်က နှိုးစက်ကအော်မှထတယ်း) ၅ မိနစ်လောက်လည်းပြန်မှေးလိုက်သေး ။ အဲ့တာ ကွာတာနေမယ် လူတော်နဲ့ လူပျင်း
ဒီလောက်နက်မကောင်းတဲ့ကြားက ကျိုးစား ပမ်းစား လာရေးတာချီးကျူးတယ် ...
ကျနော်တော့ စမ်းတဝါးဝါးနဲ့၇နာရီလောက်မှ နိုးတာ
အဲဒါ အလုပ်ရှိလို့ ထရတာ (အိပ်ရတာတော့ မက်တယ်)
မနက်တိုင်းတော့ (မထမနေရ အလုပ်ဟ) နတ်ဆိုးလာ
နိုးနေတာ ဒီစလုံးကို ရောက်ကတည်းက.......အစ်ကို
လည်း ပျော်ရွှင်တဲ့ မနက်ခင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်ပါစေဗျာ
ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ လှပခြင်း၊ သာယာခြင်း၊ ကျေနပ်ခြင်း
အဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ နံနက်ခင်းလေးတွေ ပိုင်ဆိုင် နိုင်ပါစေလို့
ပထမဆုံး စာတွေ လာဖတ်ဖြစ်တယ်။
အိမ်မှာလည်း အဖေက ကားထောင်ထားပါတယ်..
အဖေ့ကားနဲ့ အတွေ့ အကြုံရအောင် ဆယ်တန်းအောင်တုန်းကလိုက်ဖူးပါတယ်..
နေ့ သစ်တွေတိုင်းမှာ ကောင်းသောနံနက်ခင်းလှပသော
နံနက်ခင်းများကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ .
tag စာလေး ဖတ်သွားတယ်။
မနက်စောစော ထတတ်တဲ့ အကျင့်ကောင်းလေးက လူကို ရွှင်လန်းစေတယ်။ ထိုင်းထိုင်းမှိုင်းမှိုင်း မဖြစ် ဘူးပေါ့။ ကိုဝင်းဇော်ကို စောစောအိပ်ယာနိုးမယ့်သူ အမြန် ရပါစေလို့ (အဟဲ) စိတ်ဆိုးနဲ့ (စတာပါနော်)
စာဖတ်နေရင်းနဲ့ သူ့ ပဲ သနားရတော့မလို လို ..။ စောစော နှိုး မဲ့သူ ရဖို့ အဒေါ်အပျုကြီးနဲ့ ပဲ အောင်သွယ်ပေးရ တော့ မလိုလို နဲ့ ...။
မနက်အစောကြီး ထရတော့ အိပ်ရေးပျက်မှာပေါ့ ၊ ကွန်နက်ရှင်မကောင်းတဲ့ကြားထဲက ပို့စ်လေးတွေ ပုံမှန်တင်နိုင်လို့ ချီးကျုးလေးစားမိပါတယ် ကိုဝင်းဇော်ရေ။ မင်္ဂလာတွေနဲ့ ပြည့်စုံနေတဲ့ နံနက်ခင်းလေးကို လည်း အမြန်ရပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း လူပျိုကြီး ဘ၀ကလည်း ၀ဠ်ကျွတ်ပါစေလို့ ....။
မီးမီးကတော့ အိပ်ယာထရတာတော်တော်နောက်ကျတယ် နေဖင်ထိုးမှတော့မထပါဘူး (နေကအခန်းထဲမ၀င်လို့) အဟီးးးးးးးးး
၀င်းဇော်ရေ....! ကားသမားတိုင်း လူဆိုးမဟုတ်ပါဘူးလို့ လက်တွေ့ပြလိုက်ကွာ...!
စိတ်လက်ပေ့ါပါးပြီး မင်္ဂလာတွေနဲ့ ပြည့်စုံနေတဲ့ နံနက်ခင်းလေးကို အမြန်ဆုံး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပါတယ်...
အမတို့တော့ နေ့သစ်မနက်မှာ ဘယ်လို အိပ်ယာထသလဲ လို့မေးလာရင် ဖြေစရာက စကား နှစ်လုံးပဲ ရှိပါတယ်...
Haveanice everymorning ,,,,,
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းလေး ဖြစ်ပါစေ မောင်ဝင်းဇော်ရေ့ စာတွေ မကြာမကြာ ဖတ်ဖတ်သွားတယ်။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ နံနက်ခင်းလေး ဖြစ်စေဖို့ အမလည်း ဆုတောင်းပေးတယ်နော်။ အမလည်း မနက် ဘုရားဝေယျာဝစ္စအတွက် စောစော ထဖြစ်တယ်။ တစ်ရက်တလေ နောက်ကျရင် timing တွေပျက်ကုန် ရော။
မနက်တိုင်း အချိန်မှန် အိပ်ယာနှိုးပေးမယ့် စက်ရုပ်မမ ၀ယ်လို့ရရင် ကောင်းသား၊ သွားလေရာ ခေါ်သွားချင်တယ်။ ကျွန်တော်တော့ အဖွားအသံ သံပတ်နဲ့ နှိုးတာ။ အဟိ ......။
ရေးချင်တာက မနက်အိပ်ယာထတဲ့ အကြောင်း
စာဖတ်သူရခဲ့တာက ..ကားသမား ဆိုရင်..
ကားသမားတိုင်း အတူတူ ပဲ လို့
အမြဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ မနက်ခင်းလေးတွေ နဲ့ ဖြတ်သန်းရတဲ့ ဘ၀ ကို ပိုင်ဆိုင်ပါစေ
ကွန့်မတ်လာပေးတာနောက်ကျသွားလို့ဆော်ရီးနော် အစ်ကို၊ ညဘက်အိပ်တာဘယ်လောက်နောက်ကျကျ မနက်လည်း နိုးစရာမလိုပဲကိုယ့်ဘာသာနိုးတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ နော်၊
လိုရာဆန္ဒတွေ အမြန်ဆုံးပြည့်စုံနိုင်ပါစေ မောင်ဝင်းဇော်
ရေ.. အစ်မလည်း ဒီတက်ဂ်ပို့စ်လေး အကြွေးတင်နေတယ်.
နိုးကြားတက်ကြွတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဟန်ကို နှစ်သက်တယ်။
tag စာလေး ဖတ်သွားတယ်နော်။ ကားသမားဆိုပြီး ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ ရမ်းတာတော့ ကောင်းဘူးပေါ့နော်။ အညောင်းမမိအောင် လေ့ကျင့်ခန်းလဲ လုပ်အုန်း။ လမ်းခရီးမှာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ပါစေးးးး
အိပ်နေရင်းနဲ့ ဂီယာလည်း မှားထိုးနေအုန်းမယ် ဘော်ဘော်ရေ .. ကြည့်လုပ်